Nduzi Social Media maka Ndị Ọzụzụ Ego | Martech Zone
Marty Thompson na-achọpụta ọdịnaya dị egwu mgbe niile n'ihe gbasara azụmahịa mmadụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-achọ ndụmọdụ ọkachamara na ịmepụta mmepe mmekọrịta gị, amaghị m onye ndụmọdụ ka mma na ụlọ ọrụ ahụ. N'ime ihe omuma a, nduzi a bu ndi okacha amara ego. Ọtụtụ oge, ụlọ ọrụ ego na-eche na aka ha ejikọtara n'ihi usoro nnabata usoro iwu - ọ bụghị n'ezie ma ọlị. Ndị ọkachamara na-ahụ maka ego na-ejikwa amamihe na-akwado mmekọrịta mmadụ na ibe ha ma nwee usoro na nyiwe iji kwenye na-eme ọmarịcha.
Dị ka ọhụrụ Advisor Touchpoints ọmụmụ si Nnukwu nyocha, 87% nke ndị ndụmọdụ na azụmahịa maka afọ ise ma ọ bụ obere na-eji mgbasa ozi mmekọrịta (mmụba dị ịrịba ama site na 2012), ebe naanị 35% nke ndị na-eme ihe karịrị afọ 20 bụ ndị na-elekọta mmadụ. Ma ị nọ ugbu a na-etinye mgbasa ozi mmekọrịta gị na omume gị, na-arụ ọrụ na atụmatụ, ma ọ bụ na-echere obere oge, enwere ụfọdụ usoro doro anya na ihe ị na-ekwesịghị ịtụle.
Tags: onye na-enye ndụmọdụcogent nnyochaụlọ ọrụ egoonye na-ahazi egondị ọkachamara n’ihe gbasara egoelekọta mmadụ mediandu ndu ndu